Khawulela umkhawulokudonsa wesixhumi esibonakalayo senethiwekhi | Kusuka kuLinux
Khawulela umkhawulokudonsa wesixhumi esibonakalayo senethiwekhi
Ngezikhathi ezithile sidinga ukukhawulela umkhawulokudonsa, isivinini sokulanda nesokulayisha ikhompyutha ezoba naso kusixhumi esibonakalayo senethiwekhi.
Ake sithi sineseva isikhombimsebenzisi sayo esiyinhloko (i-eth0 ngokwesibonelo) esidinga ukuba nesivinini esilinganiselwe, ngani? ... nganoma yisiphi isizathu, masingalokothi sithathe kancane lokho uBoss angakucabanga futhi akubuze eqenjini le-IT haha.
Kulokhu singasebenzisa izicelo eziningi zalokhu, namuhla ngizokhuluma ngalokhu: mangaliso
1 Ukufakwa kweWonderShaper
2 Usebenzisa iWonderShaper
3 Ngilubuyisa kanjani ushintsho futhi ngibuyisele umkhawulokudonsa wami woqobo?
Kuma-distros afana ne-Debian, Ubuntu noma okuphuma kokunye, vele:
Ku-ArchLinux sidinga ukuyisusa ku-AUR:
Ku-ArchLinux kubalulekile ukufaka i-git eyodwa hhayi ejwayelekile, ngoba ejwayelekile ayingisebenzelanga
Ukuze sisebenze silula, kufanele sidlule njengepharamitha yokuqala i-interface esibona ukuthi sifuna ukukhawulelwa, bese sidlulisa isivinini esikhulu sokulanda bese esesithathu (futhi sigcine) isivinini sokulayisha.
Okuningi noma okuncane ngakho:
Lokhu kusho ukuthi ngizoba ne-bandwidth engu-1000kb yokulanda, ne-200kb kuphela yokulayishwa.
Ku-ArchLinux kubalulekile ukuthi unake Lo mugqa ngeke usebenze, ngoba ku-ArchLinux bekufanele sifake elinye iphakheji. Lapha kuzoba:
Lokho wukuthi, isibonelo:
Ngilubuyisa kanjani ushintsho futhi ngibuyisele umkhawulokudonsa wami woqobo?
Ukubuyisela emuva ushintsho, lokho ukuhlanza esikwenzile, kwanele nge:
Ngenkathi ku-ArchLinux kungaba:
Hhayi-ke akukho okunye okuningi ongangeza. Bangakwazi ukufunda imanuwali yohlelo ngo:
Ngiyethemba uzokuthola kujabulisa 😉
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Amanethiwekhi / Amaseva » Khawulela umkhawulokudonsa wesixhumi esibonakalayo senethiwekhi
Bheka, bengilokhu nginokudideka okufanayo. I-200kb ne-1000kb kungaba ukulanda okungu-100k nokulayisha okungu-20k, akunjalo?
Usho ukuthini ngo-'k '?
I-1000kb yokulanda izolingana ne-1mb, kuyilapho i-200kb ilingana no-200kb wokulayisha.
Ijubane lokudlulisa alilinganiswa ngamakhilo / ama-megabytes kepha 'amakhilo / ama-megabits'.
IGoogle inesibali esisebenzayo salokhu kuguqulwa ku-Chrome okusebenza kusuka ku-Omnibar uqobo, isibonelo: ama-megabyte ayi-10 kuya kuma-kilobytes.
Ubudlelwano bungu-1kb = 8000 bits
Leli thiphu lihle kakhulu, ngenza kanjani uma, ngokwesibonelo, eyunivesithi kunabafundi abangaphezu kuka-500 abaxhumeke kwi-WiFi ngaphandle kokubala izingcingo namaphilisi, ingabe i-wondershaper izosekelwa noma kuzodingeka ngisebenzise noma iyiphi i-hardware?
Kepha yini okudingeka uyenze ngempela, ngoba angikuzwisisi.
Ngicabanga ukuthi kubhekiswa ekunciphiseni abafundi abaxhunyiwe, kepha uhlelo olukhonjisiwe lilinganisela kuphela ukubonwa kwekhompyutha ethile, isivinini se-inthanethi sizohlala silingana nakwabanye.
Kulungile lokho ngama-squid namachibi okubambezeleka kuzokwanela?
I-KZKG ^ Gaara, uqonde lokhu okuthunyelwe (wona lo mbhalo ungenze ngawukhumbula ngenkathi ngiwufunda)?
Okudingayo ukukwenza lokho yimishini yeMikrotik
Akukaze kungisebenzele 🙁
Noma mhlawumbe bengingaqondi kahle.
Ukwenza lokhu: Sudo wondershaper eth0 1000 200
Ngabe ihumusha njengokunciphisa umkhawulo wejubane le-inthanethi kukhebula lenethiwekhi lifike ku-1000 kb / s (kilobyte ngomzuzwana) ukulanda ne-200 kb / s (kilobyte ngomzuzwana) ukuze ilayishwe?
Noma kungaba ama-kilobits ayi-1000 ezansi nomfula futhi alayishwe ama-kilobits angama-200?
Kube wusizo olukhulu kimi. Ngibonga kakhulu.
I-Trickle ibonakala isebenza, noma ngemuva kokukhipha inqubo ukulanda kokuhlola akukaze kweqe umkhawulo omisiwe; isimangalo angizange ngizame.
I-OS: Fedora 21 ngosuku
I-Trickle: inguqulo 1.07
I-Chrome: Inguqulo 40.0.2214.115 ayaziwa (64-bit)
Igama lenqubo (phezulu): chrome
Umyalo we-CLI: # trickle -d 200 / opt / google / chrome / chrome
Ngikushiyela ukuqhathanisa okuthakazelisayo: http://www.ubuntugeek.com/use-bandwidth-shapers-wondershaper-or-trickle-to-limit-internet-connection-speed.html
Ngisebenzisa 'ukukhohlisa', lapho nginesikhashana ngizama isimangaliso sokuqhathanisa 🙂
Umehluko osheshayo engikukhumbulile ukuphawula ngukuthi ukukhohlisa kungasebenza ngaphambili ukuze kumiswe ukwakheka kwenethiwekhi, i-Cc nje
Yilokho engihlela ukukhuluma ngakho kulezi zinsuku, ingabe ukwazile ukuthi kusebenze ngeChromium noma iFirefox?
umbuzo, kusebenza futhi ukukhawulela izixhumi zenethiwekhi ngokuhlukile njenge:
Angikaze ngizame ngalokho.
UJuan CP Quintana kusho
Ithuluzi elihle kakhulu!
Phendula uJuan CP Quintana
Ngingalinganisela kanjani umkhawulokudonsa hhayi kule khompyutha kuphela, kepha nakumakhompyutha axhuma kwi-Intanethi ngayo? Ngingathanda ukukwenza ngokwabela umkhawulokudonsa nge-IP ngayinye. Kungenzeka??
Kungenziwa nge-squid, iseva elibambayo ngokusebenza kahle. Ngiyabona ukuthi uvela ezweni elilodwa, eGUTL sinohlu lwamakheli nesithangami, buza laphaya uma unezinkinga nge-inthanethi. Ngama-squid kanye ne-Delay Pools kuyenziwa.
Yebo ngiyayisebenzisa, kepha angikatholi mpendulo yokuthi ngikwenza kanjani. Nginokuthile engikwenzile nge-TC ne-HTB, kepha ngisebenzisa izixhumi zenethiwekhi ezi-2 futhi ngifuna ukusebenzisa eyodwa enginayo ye-Intanethi. Ngiyabonga!!
UJonathan Diaz kusho
Kuhle !! Kade ngifuna isixazululo esisheshayo futhi esilula ngoba ngifuna sona kuphela ekhaya, kanti iskwidi siningi kakhulu kubabungazi ababili noma abathathu kuphela!
Phendula uJonathan Diaz
IBender Bender Rodriguez kusho
Super, engangikade ngikufuna, ngiyabonga kakhulu
Phendula uBender Doblador Rodriguez
Amathiphu: Ngaphezu kwemiyalo engama-400 ye-GNU / Linux okufanele uyazi: D